Paipaika politika fanilihana ny hafa : tsy moramora ny fanitsiana ny lalàmpanorenana | NewsMada
Resaka mandeha… Hisy ihany ve ny fanitsiana ny lalàmpanorenana? Tsy moramora ny raharaha.
Mandeha ny resaka ny amin’ny mety hanitsiana ny lalàmpanorenana. Paipaika sy kajikajy politika? Efa natsidiky ny filohan’ny Antenimierandoholona, mpahay lalàna, Rakotomanana Honoré, tamin’ny nandraisany andraikitra fa tokony hisy ny fanitsiana ny lalàmpanorenana. Hanao ahoana?
Misy ny mahita fa fomba hanilihan’ny fitondrana izay heveriny ho mpifanandrina politika atahorany amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika, taona 2018, izay fanitsiana lalàmpanorenana izay. Tsy olana loatra ny amin’izay votoatin’ny fanitsiana, na mety hampisy adihevitra tokoa aza.
Mila fitsapan-kevi-bahoaka ny fanitsiana lalàmpanorenana
Na ahoana na ahoana, tsy vitavita ho azy toy ny teo aloha ny fanitsiana lalàmpanorenana: tena ilaina ve? Tsy misy fanitsiana azo atao amin’ny lalàmpanorenana na iray aza, raha tsy hita fa tena ilaina, araka ny And. 161. Tsy azo anaovana fanitsiana ny faharetana sy ny isan’ny fe-potoana iasan’ny filohan’ny Repoblika, araka ny And. 163.
Raha toa ka hita fa tena ilaina ny fanitsiana, anjaran’ny filohan’ny Repoblika no manapaka eo amin’ny filankevitry ny minisitra, na ny Antenimiera amin’ny alalan’ny latsabato misaraka izay nolanin’ny roa ampahatelon’ny mpikambana no manao izany, araka ny And. 162 amin’ny lalàmpanorenana.
Lazain’io And. 162 io ihany fa tsy maintsy ankatoavin’ny telo ampahefatry ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona ny volavola na tolo-kevitra fanitsiana. Aroso amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka izany volavola na tolo-kevitra izay nankatoavina.
Mitady fahamarinan-toerana sy fitoniana politika ny fitondrana amin’izao… Na ho tratra izany na tsia: tsy manome ny filohan’ny Repoblika ny zo hanao fanitsiana ny lalàmpanorenana ny fahefana manokana ananany ao anatin’ny fisehoan-javatra mampihotakotaka na savorovoro politika, araka ny And. 163.
Ho voahaja sy ho tratra ve ireo fepetra ireo?
Ho tratra ve, ohatra, ny hoe mila telo ampahefatry ny mpikamban’ny Antenimierampirenena amin’ny fankatoavana ny volavolam-panitsiana? Mbola havitrika amina kilalao politika amin’ny alalan’ny fitsapan-kevi-bahoaka toy izany ve ny olom-pirenena? Eny, na hoe lany avokoa aza izay aroso eo. Tsy ho moramora ny raharaha.